Waa maxay Celebrity Photo daadin Na bar karaa About Data Security
Prince Harry iyo Miley Cyrus naga barayaan Data Management iyo Ammaanka
Scarlett Johansson, Prince Harry oo cajiib ah Al - waa quruxsan fudud si ay u arkaan waxa ay leeyihiin in caadiga ah. Iyagu dhammaantood waa u tirooyinka caan ah. Si kastaba ha ahaatee, tirooyinka ay heshay in ka badan wax yar ka caanka ah markii sawirrada gaarka ah ay ahaayeen 'xaday' online. Waxaan si dhab ah raaligelin in sawirka cajiib Al.
Flash An ula kac ahayn oo maqaarka caan ah had iyo jeer ka dhigaysa maqaaladaan - sida saxda ah samayn, kuwaas oo sawiro fadeexad ka samaysaa off xiddigaha telefoonada gaarka ah iyo gal World Wide Web? Waxaa jira dhowr xaaladood:
Phone Old uu tuuraa / baayacmushtari / iibin / iwm dib loo oo qof kasta go'aansado in uu sameeyo wax yar Qodis ah.
Telefoonkan kaarku lumo ama la xado oo qof ayaa sheegtay raadiyayaal goolhayeyaasha.
Haddii ay tiro ka mid ah, taasi oo ay xuquuqdeeda leh u gaar ah. Tirada laba ama saddex ha ahaatee, wuxuu keeni karaa dhibaatooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin dhaqaale, khasaaraha sumcad, halis dacwada iyo ka badan. Waxaa laga yaabaa in aad adigu leedahay dillaac xogta aan ka dhigi lahaa daboolka ka mid ah tifaftirka laakiin khatar iyo burbur iman kara weli waa isku mid.
Iyadoo 1.75 billion users casriga ah ee dunida oo dhan, mawduuca maamulka iyo ammaanka macluumaadka waa mid muhiim ah in la fahmo. Qof walba waa ogyahay in marka la kaadinayo telefoonka ah waxaa muhiim ah in ay tirtirto macluumaadka iyo xogta off waxaa ka mid ah. Qaar badan oo arrintan loo sameeyo iyadoo dib warshad - nasiib daro, oo dhan waxa ay qaadataa waa qof cajiib ah iyo dhowr daqiiqo ah baxey si jiid xogta hore ka bixiyo telefoon u muuqda maran. o
Halkan Wondershare , waxaan doonayay in aan arko sida ay xog badan oo aan laabi kari waayay off ee telefoonka ah random. Sidaas - waxaan soo iibsaday telefoonka loo isticmaalo off ee Arbacada ah. Isticmaalka Dr. Fone (macruufka 9, iPhone 6S Plus / 6S taageeray), waxaan u awoodin inay soo kabsadaan ka badan 2,400 sawiro, 100 videos, 18 xiriirada iyo boqolaal files kale oo kala duwan. Waxaad ka arki kartaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tijaabada in halkan .
Waxaan ku kalsoonahay in iibiyaha ah ee telefoonka taasi ma og Eebahoodna phone maalinta Arbacada ah weli dhaliyay buuxa macluumaadka shakhsiga ah. Tani waa sababta aad u waa inay weligood isticmaalaan tirtire ah oo xog joogto ah sida SafeEraser . SafeEraser (macruufka 9, iPhone 6S Plus / 6S taageeray) waa dhan oo dhan si loo soo afjaro - Waxba waa recoverable, xaalad kasta. Xitaa ma Dr. Fone dib ugu heli karaan xogta.
Waxaan oo dhan baratay cashir lama ilaawaan ah ka Justin Bieber iyo Miley Cyrus - si la yaab leh ku habboon?
Waxay si cad u aysan u malaynin ee ka dhalan kara maaraynta xogta xun ilaa ay sawiro xun ka dib markii dhuftay shabaqa. Waxaa laga yaabaa in aadan u leeyihiin amar ay ku, laakiin aqoon habboon iyo adeegsiga khabiir software maamulka xogta, waxaad leedahay awood ay ku naftaada iyo xogta aad loo ilaaliyo.
Oo haddana, waan ka xumahay wixii oo dhan cajiib Al ku saabsan.
> Resource > Utility > Waa maxay Celebrity Photo daadin Na bar karaa About Data Management iyo Ammaanka